Maitiro ekudzoreredza akadzimwa mafaera, vanobata, mabhukumaka uye makarenda kugadzwa kubva iCloud | IPhone nhau
Maitiro ekudzoreredza akadzimwa mafaera, vanobata, mabhukumaka uye makarenda kugadzwa kubva kuCloud
Backups ishamwari dzedu. Uye kana zvisiri, imhaka yekuti iwe unoda kurarama zvine njodzi uye iwe unofunga kuti hauzombotambura nedambudziko pane chako chishandiso chinokanganisa chikamu kana zvese zvirimo. Apple inoita kuti iCloud iwanikwe kwatiri, iro rekuchengetedza gore kwatinogona chengetedza kopi yechigadzirwa chedu chose.
Kusiyana nemamwe masevhisi ekuchengetera gore, iCloud ndiyo inoona nezve rese data ratino chengeta, angave mafonibhuku, mafaera, mabhukumaki ... kuachengeta achienderana nguva dzese nemidziyo yese yeApple inoenderana neakaundi imwechete. Asi Chii chinoitika kana tikabvisa chimwe chinhu?
Kana tikabvisa chero data rakawanda kubva kune chimwe chishandiso chine account yacho, chinodzimwa pamidziyo yese inosangana neakaundi imwechete. Parizvino zvese ndezvechokwadi. Dambudziko rinowanikwa riinhi tabvisa data ratakange tisingade netsaona kana nemaune uye isu tinoda kuidzosa.
Neraki, Apple inotipa mhinduro yedambudziko iri, kwete chete kuburikidza neTimeMachine, kana tiine Mac, asi zvakare zvakananga kuburikidza neICloud. Kuburikidza neICloud, tinogona kupora kwenguva shoma, mafaera ese uye vanobatana navo, kugadzwa kwakaitwa karenda, zviyeuchidzo uye kunyangwe mabhukumaki eSafari.
Maitiro ekudzoreredza yakadzimwa data kubva kuICloud
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuwana iyo webhu iCloud.com
Tevere, tinya pane Kurongwa kweakaundi.
Tevere, isu tinoenda kune Yepamberi chikamu uye tinya pane iyo mhando yedata yatinoda kupora: mafaera, vanobata, karenda / zviyeuchidzo kana mabhukumaki.
Kana uchibaya pane imwe neimwe yesarudzo idzi, kana tichangobva kudzima chero data, rinoratidzwa zuva nenguva tinozvidzima pamwe chete nesarudzo yekudzorera.
Apple inochengeta kopi yekuchengetedza ye data ratinobvisa kwemazuva makumi matatu, iyo imwe nguva yenguva iyo inochengetedza iyo mifananidzo iyo yatinodzima pane yedu kifaa zvakananga, yakadzima mifananidzo iyo yatinogona kuwana muYakadzimwa albha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzoreredza akadzimwa mafaera, vanobata, mabhukumaka uye makarenda kugadzwa kubva kuCloud
Mazuva ese - Apple inoimba iyo "Mea culpa"
Kudanwa kweDuty: Nharembozha ikozvino inowirirana nevatongi